OPlayer, mpilalao horonantsary feno ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny App Store isika dia mahita rindranasa am-polony mamela antsika hilalao endrika video amin'ny fitaovan'ny iOS. Iray amin'ny feno kokoa ny OPlayer, fampiharana iray ahafahantsika milalao horonan-tsary izay notehirizinay, izay ampiantranoina amin'ny mpizara ary manome antsika ny fahafaha-mijery sarimihetsika na sarimihetsika amin'ny mivantana.
Raha te hijery horonantsary ananantsika amin'ny solosaina isika, ny sisa ataontsika dia ny manokatra iTunes ary mankanesa any amin'ny faritra Applications. Eo amin'ny farany ambany, izay ahitantsika ny safidin'ny OPlayer, dia afaka misintona mivantana ilay rakitra isika. Tsy ilaina ny mampifandray ny iPhone, iPod Touch na iPad amin'ny alàlan'ny USB amin'ny solosaina, satria izy io afaka mirindra amin'ny alàlan'ny Wifi, na dia hatao haingana kokoa aza ny famindrana rakitra raha mampiasa tariby isika.
Raha te hankafy andian-tsarimihetsika amin'ny fahitalavitra ianao dia ampifandraiso fotsiny ny iPad amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny tariby HDMI ary ampiasao ny navigateur OPlayer hijerena ireo andian-tantara tsy misy fanelingelenana ao mivantana. Amin'izany no ahafahanao mankafy ny atiny amin'ireo tranonkala fahitalavitra ireo izay namoahana ny fizarana feno.
Ny fampiharana dia nohavaozina vao haingana tamin'ny fanampiana hijoro miaraka amin'ny efijery iPhone 5, fanohanana maodely malalaka, ary safidy hafa manatsara ny fampitana dikanteny sy ny fahitana fahitalavitra.
Fanavaozana: ity kinova farany ity dia toa miteraka olana amin'ny famoahana feo ny horonantsary, araka ny filazan'ny mpampiasa sasany. Izy io dia miasa ho antsika ara-dalàna.
OPlayer no iPhone kinova ary hita ao amin'ny App Store amin'ny vidiny 2,69 euro izany. Ny kinova nohamarinina ho an'ny iPad 4,49 euro ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » OPlayer, mpilalao horonantsary feno ho an'ny iPhone
Ireo mpilalao rehetra ao amin'ny AppStore ireo, satria tsy manohana AC3 izy ireo, dia tsy mendrika chestnut.
Tiako hivoaka ny fonja hametraka ny XBMC
parasol dia hoy izy:
ao amin'ny fampiharana maimaim-poana an'ny Oplayer (lite) dia mamoaka horonantsary aho toa tsara fa tsy misy re….
Tsy haiko raha olana amin'ny kinova maimaimpoana….
Mamaly ny elo
Nihena be ity mpilalao ity satria tsy ekeny ny codec feo AC3 izay be mpampiasa indrindra amin'ny sarimihetsika hitantsika. Mampiasa ny CineXplayer Hd aho izay milalao ny zava-drehetra ary mora kokoa.
Novidiko io ary tsy mitendry na dia ny antsasaky ny sarimihetsika efa nandramako aza.
Ho ahy ity app ity dia chestnut mainty iray mandra-pivoak'izy ireo ary re ny feo.
(Inona no mahatsara ahy raha tsy izany?)
Mandany vola be aho manodikodina ahy